Polygon: Blockchain ကွန်ယက်များအတွက် Open Source DeFi ဂေဟစနစ် | Linux မှ
ဇွန်လ၏ဤပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်တွင်ကျနော်တို့အခြားဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် DeFi ဘုံ၏ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအသုံး ၀ င်သောအရာများအပေါ် အခြေခံ၍ စူးစမ်းလေ့လာပြီးလေ့လာပါမည် DeFi (ဂေဟစနစ်) ပလက်ဖောင်းကိုခေါ် «အနားများ», ပွင့်လင်းခြင်းနှင့် unopened applications များ၏ကြီးထွားလာ catalog ထည့်သွင်းထားတဲ့။
«အနားများ»အဲဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် protocol နှင့်တစ် ဦး ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဘောင် တည်ဆောက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် blockchain ကွန်ယက်များ သဟဇာတ Ethereum ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာကွန်ယက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်စေသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေရှည်တွင်၎င်း၏သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ပိုမိုကြီးမားသော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ဖြစ်သည်။
နှင့်ပုံမှန်အတိုင်း, ၏လက်ရှိခေါင်းစဉ်အပေါ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့မသွားမီ "Polygon"ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်သည်ကျိုးနပ်ပါသည် နောက်ဆုံးဆက်စပ် post del DeFi ကမ္ဘာ့ဖလားသူနှင့်ဆက်ဆံသော ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုခေါ် "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ"အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စီမံကိန်းအကြောင်းပါ။
"အင်တာနက်ကွန်ပြူတာ" သည်အများသုံးအင်တာနက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းသည် backend software ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ developer များအနေဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ စီးပွားရေးကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ အများသုံးအင်တာနက်တွင်ဆာဗာကွန်ပျူတာများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး cloud ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုဘဲ၎င်းတို့၏ကုဒ်များကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ " အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ: ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စုပေါင်းတွက်ချက်မှုပလက်ဖောင်း
1 အနားများ: Ethereum Blockchains ၏အင်တာနက်
1.1 Polygon ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 ဖွံ့ဖြိုးပြီးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် application များတီထွင်ခဲ့သည်
အနားများ: Ethereum Blockchains ၏အင်တာနက်
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၎င်း၏ developer များ, ဒီ DeFi Open Source စီမံကိန်း အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်:
Ethereum နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော blockchain ကွန်ယက်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် protocol နှင့် development framework တစ်ခုဖြစ်သည်။ Ethereum တွင်ကွင်းဆက်ပေါင်းစုံ Ethereum ဂေဟစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အရွယ်အစားရှိသောဖြေရှင်းချက်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနည်းသောသူများအတွက်မီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည် DeFi ကမ္ဘာကြီး, Que "Polygon" မတိုင်မီကအဖြစ်လူသိများခဲ့သည် «MATIC ကွန်ယက်»။ ၏ဗိသုကာကိုမွမ်းမံရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မွေးဖွားသောစီမံကိန်း Ethereumသုံးစွဲသူအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိခြင်းတို့ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည် ရှုပ်ထွေး တိုးပွားလာနေစဉ်ပလက်ဖောင်း၏ အရှိန် စစ်ဆင်ရေးနှင့်အရောင်းအများနှင့်လျှော့ချ နှုန်းထားများ ကွန်ယက်မှမြင့်မား။
ယနေ့ "Polygon" o "Matic ကွန်ယက်" အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ DeFi ပလက်ဖောင်း သင်ဖန်တီးနိုင်မယ့်ကြီးမားပြီးအရည်အသွေးမြင့်စာကြည့်တိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး applications များ (Dapps)ဝက်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက်ပါ။ အများစုမှာအရာမှဖြစ်ကြသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်, ငါတို့နောက်မှစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိတွင်ဤ၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများ DeFi ပလက်ဖောင်း သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် DeFi ပလက်ဖောင်း.
ဒါဟာရှိပါတယ် အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ခြင်းတို့သည် PoS consensus algorithm ကိုတာဝန်ယူသည်။
ကမ်းလှမ်းသည် အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်အောင် Ethereum ကွန်ယက်ကိုပိုမိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသော sidechains များအကြား။
၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည် ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုမူဘောင် "Polygon SDK" ၎င်းသည် developer များအား Ethereum နှင့်လိုက်ဖက်သောချည်နှောင်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ကွန်ယက်ကိုကွင်းဆက်ပေါင်းစုံစနစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုထားသော application မျိုးစုံကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
Polygon SDK သည် Ethereum ကို Multi- ကွင်းဆက်စနစ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအော်ဂဲနစ်ဂေဟစနစ်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ Multere ကွင်းဆက် Ethereum ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြီးထွားမှုအတွက်မူဘောင်တစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် application များတီထွင်ခဲ့သည်
၏အတော်များများက ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်လျှော့ချထားသောအပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ်မ, အတွင်းသို့မဟုတ်အတူအတွင်းသို့မဟုတ်တီထွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် "Polygon", ဝဘ်ပေါ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ပါသည် အနားများ, DApps Matic ကွန်ယက် y Defiprime အနား။ ထိုအကြား ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် DApps အောက်ပါ3ဖော်ပြနိုင်ပါသည်မီးမောင်းထိုးပြ:
Aaveသိုက်များနှင့်ငွေချေးယူသူများအတွက်အတိုးများရရန်အတွက်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မရှိ၊ စောင့်ကြည့် web ကို y GitHub.
Autonius- DeFi ဂေဟစနစ်အတွက်လက်လှမ်းမီသော၊ သုံးရလွယ်ကူပြီးတတ်နိုင်သောစီးပွားရေးကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တည်ဆောက်ထားသော DAO (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့သို့မဟုတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့) သည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် cryptocurrency trading terminal ကိုရည်ညွှန်းသည်။ စောင့်ကြည့် web ကို y GitLab.
သင်္ချာပိုက်ဆံအိတ်- အများပြည်သူသုံးကွင်းဆက်ဂေဟစနစ် ၃၈ ခုကိုထောက်ပံ့သော EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos, IRISnet ။ ။ စောင့်ကြည့် web ကို y GitHub.
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သတိပြုသင့်သည် DeFi World Open Source စီမံကိန်း ဆက်စပ်နေပါတယ် Cryptocurrency အညီအမျှခေါ် အနားများ (Matic)။ ဘယ်ဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သနည်း ထိပ်တန်း 20 ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားအသိအမှတ်ပြုသူများ၏ဘေးတွင်ရပ်နေစျေးကွက်အရင်းအနှီးအားဖြင့်အဓိက cryptocurrencies ၏ Litecoin (LTC) နှင့် Stellar (XLM).
"Polygon သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလှူရှင်များကိုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့မှတည်ဆောက်သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ "
ဒီအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လယ်ပြင်၏ Defy ကိုခေါ် "Polygon" o "Matic ကွန်ယက်" စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Polygon»လျှောက်လွှာများစွာတွင်ဖွင့်ထားသည်ဖြစ်စေမပါ ၀ င်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသုံးဝင်သောပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ် DeFi ဂေဟစနစ် protocol နှင့်တစ် ဦး ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဘောင် တည်ဆောက်ရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် blockchain ကွန်ယက်များ သဟဇာတ Ethereum; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » အနားများ - Blockchain ကွန်ယက်များအတွက် Open Source DeFi ဂေဟစနစ်